Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Joel Campbell tantaran'ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "Black Panther". Ny tantaran'i Joel Campbell Childhood Plus ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny fotoana nahaterahany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, fitiavana ny fiainana, ny fiainam-pianakaviana ary ny tranga misimisy momba ny OFF-Pitch izay tsy dia fantatra loatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny fahaiza-manaon'ny tetikadiny ao amin'ny World Cup 2014. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra betsaka momba ny Bio Bio Joel Campbell izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Joel Nathaniel Campbell Samuels dia teraka tamin'ny andro 26th of June 1992, ho an'ny reniny Roxana Samuels sy ny rainy, Humberto Campbell any San José, Costa Rica.
Ireo ray aman-dreny aseho etsy ambany ireo dia mpilalao baolina taloha izay nifankahalala sy nanjary tia noho ny lalao baolina kitra izay nitondra azy ireo.
Rehefa nanangona ny ampahatelon'ny taranany efatra (Joel) i Humberto Campbell sy Roxana Samuels, dia nitombo ny fototaratry ny baolina tao anaty fitarihan'i Doña Roxana, noho ny antony tsotra iray. Ny zanaka malalan'izy ireo, dia i Joel Campbell no teraka ho mpilalao baolina fahadimy ho an'ny fianakavian'i Roxana Samuels izay solontenan'ny taranaka 4 izy ny fanoloran-tenan'ny fianakaviany. Roxana Samuels (maman'i Joel Campbell) no antony voalohany mahatonga ny baolina amin'ny ADN ny zanany. Tamin'izany andro izany dia nantsoina izy Pelela, mazava ho azy, ho an'ny Breziliana malaza Edson Arantes manao Nascimento, Pelé. Nanao tanjona marobe izy hoditra nandritra ny fotoanany.
Roxana, nanantitrantitra indray fa ny zanany lahy Joel dia nampianarina tamin'ny baolina kitra avy hatrany hatrany an-kibony izay nolefany tanteraka. Nilaza ihany koa izy fa taorian'ny fahaterahana, na dia tsy afaka nanambany ny teniny voalohany aza izy, dia efa nahafantatra ny tsikitsiky i Joel ary nametraka hatezerana tamin'ny baolina kitra. Ny fahaizany mitsikitsiky tsy tapaka dia ny hatsaram-panahy noraisin'i Joel sy ny rahalahiny, Junior Humberto, Katherine ary Nekisha, avy tamin'i Don Humberto, rainy. Samy mpivavaka be ny ray aman-dreny ary manangana ny zanany ho tahaka azy ireo. I Campbell no lehibe niaraka tamin'ireo iray tam-po aminy (anarana voalaza etsy ambony).
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Amin'ny maha-zanaky ny fianakaviana baolina kitra, ny tapakila dia fototry ny ADN foana. Tazo toy izany no nananan'i Joel tamin'ny baolina anankiroa. Nisy balafom-basy iray izay nitazona azy raha ny iray kosa nanidina teny amin'ny valindrihana na tao amin'ny zaridainan'ny mpifanolo-bodirindrina vitsivitsy izay tsy nety namerina ilay baolina ho azy. Tamin'ity indray mitoraka ity, Joel Campbell dia efa-taona.
Nisehoana aloha ny onjam-panaon'i Campbell Gene, tamin'izy mbola zaza. Humberto, ny rainy dia nahatonga izany ho zava-dehibe ho an'i Campbell tamin'ny mbola kely mba hianatra ny soatoavin'ny baolina toy ny fananarana sy ny fanoloran-tena. Ankoatra ny fitaomam-panahin'ny ray aman-dreny, dia nanampy an'i Campbell ny fananana fototra tsara tao amin'ny asany. Tamin'izany fotoana izany, ny Ny Sekoly dia nanolotra azy ny fahafahana hanao fialan-tsasatra amin'ny lalao fifaninanana mandritra ny fanatanjahan-tena. Izany dia nanamafy ny fahavononany handray 'Football' Tena matotra araka ny hita amin'ny sary etsy ambany.
Tapa-kevitra mafy i Joel mba hahatanteraka ny nofinofiny ary ny faniriany dia tsy hoe faniriana fotsiny. Nanomboka i Campbell tao Saprissa, klioba an-trano ao Costa Rica antsoina hoe "Carajillos ao Valencia"Tao San Rafael Abajo de Desamparados. Tamin'izany fotoana izany, ireo mpanazatra izay nitana azy nandritra ny asany nandritra ny fahatanorany, dia mamaritra azy ho mpanafika haingam-pandeha manana fahaizana lehibe haka ny mpanohitra azy. Manana fahaiza-manaony tsara koa izy ary mpikarakara tsara. Joel Campbell dia nahavita ny baolina fahatanorany ho toy ny zatovo matotra.
Taorian'ny nahatanterahany ny asany tamin'ny fahatanorany, dia i Joel ihany no nanao fisehoana an-tsehatra roa talohan'ny nandalovan'ny mpikaroka nirohotra nanerana ny firenena. Nolazainy fa Seville sy Fiorentina no nanao sonia ny Gunners.
Na dia nifindra nankany amin'ny Gunners from Saprissa tao amin'ny 2011 aza, ny mpanafika dia tsy maintsy niandry dimy taona talohan'ny nahatonga azy ho ekipa voalohany amin'ny ekipa voalohany noho ny fahombiazan'ny World Cup 2014. Mbola nahita fifaliana nilalao ho an'ny andianà klioba izy na dia niala tao amin'ny Arsenal indray aza. Lasa hazo volamena ho an'i Campbell ny baolina kitra, fanatanjahan-tena izay nahitana ny fahatanterahany. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Maty hatramin'ny fahazazany i Joel dia lasa olom-pirenena Costarican tsy miankina noho ny fampisehoana mahatalanjona nataony. Ny fahaiza-manaony sy ny hery anaty, ary koa ny fomba fiainany eo an-tampony, dia manangana sary feno azy. Ny marina dia tia ny hatsaran-tarehy i Joel Campbell ary tena nanokana ny fotoanany izy mba hahazoana ny tsara indrindra ho an'ny fony.
Nahita fitiavana tao amin'ny Maria Fernanda Cascante i Joel izay indray mandeha. Ny fifandraisan'izy ireo dia nitombo avy tamin'ny mari-piandohan'ny fitiavana.
Vantany vao nihaona tamin'i Fernanda tsara tarehy izy, dia tsy nanam-potoana mihitsy i Joel Campbell nahafantatra ny ray aman-dreniny izay nanome azy ireo ny fitahiana, ny fanohanana ary ny fifandraisana.
Joel Campbell nandao an'i Fernanda nandritra ny taona 8 ary ny fitiavan-dry zareo dia tarihin-dry zareo noho ny fahaizan'izy ireo mifangaro amin'ny fotoana sy fotoan-tsarotra.
Taorian'ny fankalazana ny taona 8 tamin'ny fifandraisany dia tonga ny volavolam-panambadiana. Ny mariaziny dia natao tao Iglesia de Pozos, de Santa Ana ao Costa Rica tamin'ny volana 2017.
Nanatrika ny fampakaram-bady ny ekipa mpiara-dia aminy Costa Rican tahaka Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, ary Keylor Navas. Nahafinaritra an'i Joel Campbell ny fiainam-panambadiana mahatalanjona rehefa nasehony indray ny vohoka tamin'ny vadiny teo amin'ny sary etsy ambany.
Niteraka zazavavy kely tsara tarehy antsoina hoe Brianna Campbell i Fernanda. Mbola mitoetra ho zanany voalohany sy tokana izy ireo amin'ny fotoana hanoratany. I Joel araka izay aseho etsy ambany dia tena mifamatotra amin'i Brianna Campbell, zanany vavy mahafinaritra.
Manana fihetseham-po i Joel Campbell ary mihetsi-po lalina momba ny raharaha ao an-tokantrano sy ny tokantranony.
I Joel Campbell sy ny vadiny ary ny zanany vavy dia tia miala sasatra any amin'ny toerana mahafinaritra voajanahary.
Ny fananana vady tsara tarehy sy zaza mahafinaritra tokoa dia mahatonga an'i Campbell hiova mba ho tsara kokoa, ka ho lasa akaiky an'Andriamanitra. I Joel dia mahita ny vadiny, ny reniny ary ny zanany vavy ho toy ny andry faharoa eo amin'ny fiainany, ary ny voalohany dia Andriamanitra.
Roxana Samuels, renin'i Joel, dia nanambara fa talohan'ny lalao tsirairay, ny zanany dia mamaky ny Salamo 27. Ny tsara indrindra dia nanomboka ny fandefasana izany avy amin'ny vadiny sy ny reniny. Izany no fomba i Campbell no mino ny fampisehoana ataony.
Hoy ny Salamo 27; The Tompo no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko; iza no hangovitako?
2 Raha ny ratsy fanahy, na ny fahavaloko, na ny fahavaloko, dia nanatona ahy hihinana ny nofoko, dia tafintohina izy ka lavo.
"Tsidiho ny Baiboly mba hahazoana ny sisa!"
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny ray aman-dreniny: "Sambatra ny fianakavian'i Humberto", hoy Doña Roxana renin'ny tokantrano. Tsara ny mahafantatra fa i Humberto izay mpilalao baolina kitra baolina taloha dia Seaman ankehitriny ary ny vadiny (Joel Campbell) dia mpilalao baolina misotro ronono.
Ny fianakaviana Campbell dia manana teoria fa tsy mila hialona na iza na iza izy ireo. "Mitovy daholo ny fepetra rehetra mitovy," hoy ny ray izay voatanisa etsy ambany dia ny fijerena ny fiderana baolina kitra.
Ny momba ny renin'i Joel Campbell: Ny renin'i Joel Campbell, ny baolina taloha dia nitana ny asany tamin'ny kintana mena an'ny Atlantika izay tarika vavy izay notarihan'ny vadiny talohan'ny nahitana azy ireo ary nanjary tia. Samy akaiky ireo Roxana sy ny zanany lahy Campbell. Misy porofo atao ao amin'ny fanambarana etsy ambany.
Dona Roxana dia niaiky toy izao: "Naterak'i Joel foana teo amin'ny ondana aho tamin'ny mbola zazakely. Hatramin'ny daty, mbola mbola manana io fanosotra io eo akaikiny i Joel. Mandray azy amin'ny toerana rehetra alehany izy, toy ny zavatra mahafinaritra. Io ondana io! "
mpiray tam-po: "Mpilalao izy dia fantany fa tsy noho ny zava-bitany ara-panatanjahan-tena fotsiny, fa noho ny fahafahany mifandray sy mifandray akaiky amin'ny mpiray tampo aminy," hoy i Michel, zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Miezaka manampy ny hafa i Joel Campbell, toy ny hoe mora ihany koa izy hisorohana ny fifandonana amin'ny havany sy ireo namany izay mialona azy.
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tatitra manokana
I Joel Campbell dia tia soavaly nefa matahotra ny mitaingina iray.
Campbell dia miaina fiainana mahatalanjona izay azontsika fantarina amin'ny alàlan'ny Instagram ofisialiny. Manana orinasan-telefaona izy.
Ankoatra ny fiarabe fiara samihafa, Joel Campbell dia namana akaiky indrindra amin'ny alika biby fiompy.
Momba azy hery, Campbell dia Tena miavaka, mahazatra, mampihetsi-po, ary miombom-pihetseham-po.
Momba azy fialam-boly, Campbell dia tia Art, fialam-boly any an-trano, miala sasatra na ao anaty rano, manampy ny olon-tiany (indrindra fa ny ray aman-dreny sy ny iray tam-po aminy), ary manokana ny fotoanany miaraka amin'ny biraony ao an-trano. Ny tati-baovao ao amin'ny media dia milaza fa mpianatra amin'ny programa amin'ny oniversite amin'ny aterineto izy.
Inona no tsy nankasitrahan'i Joel Campbell: Ireo vahiny, izay tsikera ny reniny ary mamoaka vaovao momba ny fiainany manokana.
Joel Campbell Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Wierd Facts
Campbell dia tenany ihany amin'ny endriny. Nividy ny fonosan'ny baolina kitra 100 izy taloha mba hahitana ny tenany. Nampalahelo fa tsy nanao izany izy.
Mankalaza ny tanjony izy amin'ny fiarahabana ho fomba iray hitaterana ireo havany. Indraindray dia misy fankalazana mahatsiravina aseho eto ambany.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Joel Campbell momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Ny tantaram-piraisan'i Fred Childhood Plus untold
Ny tantaram-piainan'i Lucas Moura momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa dia navoaka momba ny biography